19 Aug, 2021 - 15:08 2021-08-19T15:06:34+00:00 2021-08-19T15:06:34+00:00 0 Views
MAKADII? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvagawo mukadzi ane mwana 1 kana 2 ane makore 18 – 28. Ngaave anogara muHarare. Nhare yangu 0775 679 788.
Makadiiko vatsigiri? Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1. Ndinotsvagawo mukadzi anoda imba ane mwana 1 kana 2 aine makore 25 zvichidzika. Nhare yangu 0771 552 114.
Makadii? Ndiri murume ane makore 37, HIV+ uye ndinodawo mukadzi anoda imba ane makore 20 kusvika 40. Anodawo ngaandibate pa0780 616 362.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 28, handisati ndaroora uye ndotsvaka masikana kana mukadzi ane mwana wakewo asi anogara Gweru. Anoda ngaandibate pa0778 886 512.
Ndiri murume ane makore 39, ndine mwana mumwe uye handisi pamushonga. Ndotsvakawo mukadzi wekuroora. Nhare yangu 0779 145 946.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 24, ndotsvagawo musikana ave kuda zvekuroorwa ane makore 18 – 20. Anenge andida ngaandibate pa0782 812 520.
Makàdiiko? Ndokumbira mundishambadzireiwo mubepanhau. Ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane muviri muhombe-hombe ane makore 29 zvichidzika, ane mwana 1 chero asina mwana. Ini ndinorima nekupfuya. Ndine makore 47 nevana 2, handina mukadzi. Andida ngaatumire foto yake. Whattspp:+263712701673, E-mail: [email protected], facebook: 1974emanueldube
Makadii? Ndiri murume ane makore 41, ndotsvaga mukadzi wekuroora asina chirwere akavimbika. Zvakawanda totaura pa0715 784 779.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42, ndotsvagawo mudzimai wekugara naye. Ndine vana 3, nhare yangu 0714 862 307.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 24 nevana vaviri, handisi pamapiritsi. Ndinodawo murume wekuvaka naye imba. Andifarira ngaafone kana kutumira SMS pa0778 464 843.
Ndine makore 35 nemwana 1. Ndinoda mukadzi kana musikana ane makore 25 – 30. Andifarira ngaandibate pa0774 852 885, zvizhinji totaura pasms kana kufona.
Makadini? Ndodawo mudzimai wekuroora ane makore 19 kusvika 26. Nhamba dzangu 0772 432 724.
Makadii? Ini ndiri murume ane makore 40, ndinotsvagawo musikana ane makore 25 kusvika 35 ane mwana 1 kana asina. Ngaave anoda zveimba. Anoda anondibata pa0719 321 597.
Ndiri murume ane makore 43, HIV positive uye ndotsvaga mudzimai ane makore 35 – 40. Nhamba dzangu 0772 473 104.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28, handisi pamushonga uye ndiri kutsvakawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 26. Chero ane mwana 1 anoda zvekumusha. Andifarirawo nhamba dzangu 0713414395. Ndinonzi Edson Chnogwenya, ndinogara kuMasvingo.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 26, ndinotsvagawo mukomana ane makore 28 kusvika 35. Ndinoda munhu ari pachokwadi anotarisira kuti hushamwari hwedu husvike muwanano. Mukomana muKristu anoda Mwari uye ane mwoyo wakanaka nehunhu hwakanaka, anenge andifarira fona apa 0771 174 451.
Makadii henyu? Ndiri mukadzi ane makore 38, HIV positive uye vana ndine 2 vakawanikwa. Ndiri kuKaroi, ndodawo murume ane rudo netsitsi ari serious neimba. Anoda anondibata pa0715 652 163.
Ndiri murume ane makore 40, ndotsvaga mudzimai akavimbika ane rudo uye asiri pamushonga. Ngaave nemakore 30 kusvika 38 uye ane vana vake. Ndine vana vatatu, andifarira ngaandibate pa0718 364 017.
Makaita basa ndakawana wandaida saka vose vachiri kufona pa0784 439 415.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 40 nevana vaviri. Ndinotsvakawo murume ane makore 40 kusvika 45 anoda zvekuvaka imba neni ari pachokwadi. Vane vakadzi ndapota musafona henyu. Nhamba dzenhare 0787 337 558.
Ndiri mukadzi ane makore 21, ndinotsvaka wekushamwaridzana naye. Ndine mwana 1, varume vevanhu kwete. Ndoda ari pachokwadi ngaandibate pa0780 588 393.
Ndinotsvagawo musikana ane makore 25 kusvika 35 anoda zveimba uye anonamata. Ndine makore 40. Ari muZimbabwe anoda ngaandibate pa0774 296 731.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28 uye ndotsvaga musikana akanaka asina chirwere ane mazirudo. Ndinoda ane makore 25 zvichikwira, anogara muHarare. Ndoda ane mari dzake, ngaandibate pa0776 242 073.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 30 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 25 ekuberekwa anoda zvekuvaka imba neni. Ngaave asati amboroorwa nekuti inini handisati ndamboroora. Ndinoda akanaka pachiso nemwoyo, ndinoita mabasa emaoko. Anondida anondibata pa0712 856 878.
Ndinotsvagawo mudzimai wekufambidzana naye, ndine makore 38. Ndinogara muHarare, ndinonzi Maxwell Marere. Nhare yangu 0779 175 876.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana vaviri, HIV positive uye ndinoda murume akagwinya seni. Ada ndibatei pa0737 953 245.
Ndiri mukomana ane makore 19, ndotsvagawo mudzimai. Nhamba dzangu 0716 011 962.
Makadii? Ndokumbirawo mushambadzewo shambadzo yangu. Ndiri mukomana ane makore 24, ndinodawo musikana wokuroora ane makore 18 – 23. Andida ngaandibate pa0787 855 423.
Ndapota ndishambadzeiwo. Ndiri murume ane makore 42 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 35 kusvika 40 ane vana vaviri. Andida anofona panhamba idzi 0716 365 642, zvakawanda tozotaura.
Makadii paTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 33, ndinotsvagawo murume ane makore 40 – 45. Anoda ndibate pa0775 170 114, ndoda ari pachokwadi. Ndatenda.
Ndiri mukomana asina mukadzi, ndiri kutsvaga musikana ane hunhu uye anopinda positori, masowe kana Zion. Ngaave anoda zveimba asiri tsotsi. Ngaandibate pa0719 321 597.
Kwayedza makadini? Ini ndiri mukomana ane makore 22 ndotsvagawo musikana ari serious anoda zvemba ane makore 18-21. Ndobatika pa0717 125 773.
Makadiiko? Ndiri murume ane makore 38, ndotsvaga mukadzi ane makore 25 – 32 wekufambidzana naye anoda zvemba. Ane mwana mumwe chete ngaandibate pa0774 763 083.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Andida anondibata pa0783 861 931, ndoda asiri pamushonga.
Ndiri murume ane makore 40, ndotsvaga mukadzi ane makore 25 kusvika 35 kana ane mwana 1. Ndoshanda uye ndobatika pa0715 104 628.
Makadiiko? Ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa nevana vakomana vaviri. Ndinorarama ndisina hutachiona hweHIV (negative) uye ndinotsvakawo munhukadzi anoda zveimba ane makore 25 kusvika 30. Pari zvino ndinogara muHarare, anoda kuziva zvakawanda nezvangu ngaataure neni pa0719 613 733.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 40 uye ndiri pamushonga. Ndine mwana 1, ndotsvakawo murume ari pamushonga seni wekufambidzana naye. Ngaave ane makore 43 – 56, nhamba dzangu 0788 693 636.
Ndiri mukomana ane makore 22, ndotsvagawo musikana ane makore 19 zvichidzika. Nhamba dzangu 0787 312 645.
Ndinodawo mukadzi ane makore 32, ndiri kwaKutama kwaZvimba. Zvakawanda totaura pa0784 618 443.
Ndiri murume ane makore 41, ndotsvaga mukadzi ane makore 25 kusvika 35. Ndoshanda, zvakawanda totaura ndobatika pa0775 618 795.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 35, ndodawo murume wekuvaka naye musha ane makore 36 – 45 ari HIV negative achigara muHarare. Anoda anofona kana text pa0771 166 964.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana 2. Ndiri kudawo murume wekushamwaridzana naye, ngaave ari pamushongawo seni ane makore 45 – 60. Ndogara Harare.
Makadii? Ini ndiri murume ane makore 31 ekuberekwa, ndine vana 2 uye ndinoshanda mushando wemaoko. Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora akasimba zviri nani ane makore 20 – 27 ane mwana 1 kana asina. Zvakawanda tinozotaura, ndobatika pa0779 775 537.
Makadiiko veKwayedza? Ndotsvagawo musikana anoda kuroorwa ane makore 18 – 22. Handidi vanotamba, ndine makore 26. Andida ngaandibate pa0777 203 390.
Ndinodawo musikana ane makore 19 kusvika 23, mupfupi uye ane magadziko. Ngaave aine hutano hwakanaka muropa. Zvizhinji totaura pa0712 532 047.
Ndiri murume ane makore 42. Handina mwana uye ndinotsvaga musikana ane makore ari pakati pe19 kusvika 27 asinawo mwana. Anoda ngaatumire SMS pa0772 572 184.
Ndiri murume ane makore 40. Ndinotsvagawo mudzimai, nhamba dzenhare 0787 160 671.
Ndiri murume ane makore 44, ndotsvagawo mukadzi wewanano ane makore 30 zvichikwira asiri pamushonga. Nhamba yangu 0773 769 794.
Ndiri mukadzi ane makore 42, ndinotsvagawo murume ane makore 45 zvichienda mberi. Ngaave ari pachokwadi, matsotsi kwete. Andida ngaandibate pa0713 775 630.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28, ndine mwana 1 uye ndinotsvagawo mudzimai asina chirwere. Andifarira ngaandibate pa0784 009 717.